Global Voices teny Malagasy » Herisetra ataon’ny polisy any Timor nalaina an-tsary mihetsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Febroary 2010 16:45 GMT 1	 · Mpanoratra Keta Haluha Nandika Lila
Sokajy: Timor Atsinanana, Ady & Fifandirana, Lalàna, Tanora, Zon'olombelona
Tsy zava-baovao ny herisetra ataon'ny polisy any Timor-Atsinanana  , kanefa vaovao ny nangalana izany an-tsary mihetsika. Zavatra niseho tamin'ny raharaha “Rodney King ” tany Timor-Atsinanana sy ny polisiny izy ity.
Polisy any Timor (PNTL) nalaina an-tsary eo am-panaovana herisetra. (Avy amin'ny fahatsaram-pon'i A.Tilman)
Polisy any Timor (PNTL) nalaina an-tsary eo am-panaovana herisetra. (Nahazoana alalana tamin'i A. Tilman)
Ny 21 janoary 2010 dia navoaka tao amin'ny Facebook ny sary mihetsika maneho polisy manao herisetra faran'izay mahatsiravina ary fotoana fohy avy eo dia navoaka tao amin'ny YouTube indray. Miteny ho azy ny sary. Tonga dia voatsikaritry ny mpitoraka biloagy any Timor ilay sary mihetsika, anisan'ireny ny Timor Hau Nia Doben .
Nandritra ny fanjanahan-tany nataon'ny portioge dia nahazatra ny fanararaotana fahefana natao tamin'ny vahoaka Timorais. Teo anelanelan'ny taona 1975-99 dia nifehy an'i Timor-Atsinanana ny fanjakana Indoneziana ary nahazatra sy tena faran'izay nahatsiravina ny herisetra nataon'ny polisy. Hatramin'ny nahazoan'i Timor-Atsinanana fahaleovan-tena tamin'ny taona 2002 dia nihena ny herisetra nataon'ny polisy na dia tsy nisy antontan'isa mazava tsara aza. Na izany aza dia noresahana betsaka tamin'ny fampahalalam-baovao izy ity tato ho ato. Ny gazety mpivoaka isankerinandro Tempo Semanal no milaza ny zava-nisy rehetra tato anatin'ny 2 volana ao amin'ny weblog  azy manokana (Story one , two  and three ).
navoakan'ilay solombavambahoaka ao amin'ny antoko FRETILIN  , Jose Teixeira am-pahibemaso ity ny sary mihetsika. Ny pejiny ao amin'ny facebook mifanohy amin'ny sary mihetsika  no milaza izao manaraka izao.
Niseho tany Atauro nandritra ny fanokafana ny Fifaninana Manjono Iraisam-pirenena izy ity…..Fanitsakitsahana zon'olombelona izao fihetsika izao ary tsy azo leferina eto amin'ny firenentsika.
Ny nosy Atauro , 10km miala ny sisin-dranomasina any Timor-Atsinanana avaratry ny renivohitra Dili – ka noho izany dia fehezin'ny lalàna misy amin'ny distrikan'i Dili. Eo ambany fifehezan'ny Misionan'ny Firenena Mikambana misahana an'i Timor Atsinanana (UNMIT)  ny distrikan'i Dili.
Tsy miraharaha, hita eo amin'ny sary mihetsika miaramila 2 an'ny firenena mikambana, mijery fotsiny am-pilaminana na dia mamono olona amin'ny vody basy aza ny polisy any an-toerana. Mifarana eo amin-dry zareo ilay sary mihetsika ary hita eo koa mpitazana hafa, Timorey sy vahiny, mijery ny polisy mitarika ilay niharan-doza eny amin'ny sisin-dranomasina, tsy hitan'ny fakan-tsary intsony sy any anaty lobolobo.
Polisin'ny Firenena Mikambana mijery polisy Timorey midaroka tanora iray amin'ny totohondry, daka, toto vody basy
Tsy fantatra na efa nisy fanadihadihana na fanasaziana natao na tsia. Angamba tsy ho izay satria tsy nisy antony ny nandefasan'ilay olona ity sary mihetsika ity akory raha izany. Ity olona nandefa azy ity mantsy dia mpikambana ao amin'ny kômisiona B ao amin'ny parlemanta miandraikitra ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana, ny raharaham-bahiny any Timor, ary izay indrindra no antony hanarahany maso ny fihetsiky ny polisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/01/4804/
 Rodney King: http://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_King
 facebook mifanohy amin'ny sary mihetsika: http://www.facebook.com/photo.php?pid=30928941&id=1359323396#/video/video.php?v=1334293361609&ref=mf
 Atauro : http://en.wikipedia.org/wiki/Atauro
 Misionan'ny Firenena Mikambana misahana an'i Timor Atsinanana (UNMIT): http://en.wikipedia.org/wiki/UNMIT
 Keta Haluha: https://globalvoicesonline.org/author/keta-haluha/